सानेपा काण्डमा, नयाँ तथ्यसहित प्रहरीले घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्यो ! - Mitho Khabar
February 19, 2020 mithokhabarLeaveaComment on सानेपा काण्डमा, नयाँ तथ्यसहित प्रहरीले घटनाको विवरण सार्वजनिक गर्यो !
डेढ साताअघि पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुना सानेपा हाइटस्थित घरभित्रै मृ”त फेला परिन् । घटना अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका केही नयाँ तथ्यसहित प्रहरीले विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ग’म्भीर प्रश्न छ – कामदार विजय एक्लैले त्यो काम कसरी गरे ? नाइलनको पा”’सो लाग्दा डो”’री चुँ’डिई भुँ’इमा ब’ज्रि”एर विजयले प्रा’ण त्या”गे भनिएको छ । सबैभन्दा ग”म्भीर अनुसन्धानको पाटो त यो छ कि, सिसिटिभी फुटेजमा विजयले मुनामाथि टाउकोमा निरन्तर हा”’नेको देखिन्छ तर एउटा जिउँदो मान्छेलाई कसैले नीलो प्लास्टिकको पिर्काले हान्दा ज्या”न जान्छ कि जाँदैन ? प्लाष्टिकको पिर्काकै भरमा त मान्छे बेहोस पनि हुँदैन, र’क्तमु’छेल हुनु टाढाको कुरा ।
अनि २३ वर्षको युवकले ४८ वर्षकी महिलालाई पछाडिबाट डो’रीले क”सेर ल’डाउन र एक्लै घाँ”’टी थि”चेर मा”र्न कत्तिको सम्भव होला ? त्यसरी नै नियत खराब गर्दा मा”रिन लागेको मान्छेले चूपचाप घाँ”’टी थापेको पक्कै थिएन । होहल्ला, रोदन, चि’त्का’र वा हा’रगु’हार गरिएको हुनुपर्छ ।
त्यत्रो हल्ला हुँदा छिमेकी कहाँ थिए ? यदि त्यस्तो हल्ला भएन भने निर्मला पन्त प्रकरणमा झैं भो’कल क’र्ड (घाँटीबाट आउने आवाज) अवरोध गरिएको हुनुपर्छ । तर, त्यो काम एक्लो मान्छेबाट, त्यसमा पनि त्यो विषयको तालिम वा ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । प्रहरी अनुसन्धानको अकोए पाटो छ, घटना हुनुभन्दा एक महिनाभित्र पूर्वसचिव कार्की, मृ’तक मुना र कामदार विजयको मोबाइलमा भएका संवाद, एसएमएस आदान–प्रदानको विवरण, जुन आउने क्रममै छ ।
कार्कीले घरको सिसिटिभी फुटेज आफ्नो मोबाइलमा हेर्ने गरी जडान गरेका थिए । घरमा पत्नी भए नभएको ? को आयो, को गयो ? जस्ता सबै कुरा आफ्नै मोबाइलबाट हेर्थे । विजयको पछिल्ला दिनको मानसिक परिवर्तनप्रति कुनै आशंका थियो कि ! वा त्यस दिनको स्थिती के हो ? विजय पछिल्लो समय घर सरसफाइ गर्ने कामदार मात्र सीमित थिएनन् , उनकी मुनाका व्यक्तिगत ड्राइभर पनि थिए । यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।
घरमा आ’गो लग्यो, ५ बर्षे बच्चाले यसरी ब’चाए आफ्नी बहिनीको ज्या’न…
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्यान दुर्घटना हुँदा एकको मृ त्यु, ३ घा’इते
मुना ह*त्याका’ण्डको नयाँ तथ्य: पूर्वसचिव हेर्थे यस्तो सम्म : हेर्नुहोस